Articles Archives — Anycall Mobile
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီရက်တွေထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Location Tracking နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။ တချို့ကလည်း ကိစ္စက လူတွေကို လန့်အောင် ခြောက်ထားတာ တကယ်ကိုယ့် Location ကိုလိုက်လို့မရဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့…
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ Great Firewall အကြောင်းကို နည်းနည်းလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။ Great Firewall လို့ပြောရင် အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြမှာက အိမ်နီးချင်း ပေါက်ဖော်ကြီးကိုပါ။ တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ Internet ပေါ်မှာ…
ဒီနေ့မှာတော့ Samsung ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါ့မယ်။လက်ရှိ Android User တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စား အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ Android ဖုန်းလေးမှာ Android 11 ရလာမှာလား? ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
အခုခေတ်မှာ Smartphones ၊ Tablet ၊ Computer စတဲ့ Device တွေက ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့နေရာကို ယူထားတာကိုအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း “တန်ဆေးလွန်ဘေး” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ဒီ Devices တွေကို အလွန်အကျွံ သုံးမိသွားရင်တော့ …
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေ အားပိုခံလာအောင် ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ ?
(Unicode) စာဖတ်သူအနေနဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို တစ်နှစ်ကျော်အထိ အချိန်ကြာကြာ သုံးနေတယ်ဆိုရင် ဖုန်း Battery ဟာ အရင်ကလောက် အားမခံတော့တာကို သတိထားမိလောက်မှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ Battery အသစ်လဲရတော့မယ့် အခြေအနေတွေအထိကြုံလာရပါတာ့တယ်။ တစ်ချို့ Users တွေဆို ဖုန်းအသစ်လဲတဲ့အထိ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်…